Komity karatra maha matihanina : Laharam-pahamehana ny fanadiovana -
AccueilRaharaham-pirenenaKomity karatra maha matihanina : Laharam-pahamehana ny fanadiovana
Handraisana fepetra hentitra ireo olona misoloky ho mpanao gazety kanefa tsy izy akory. Maro izy ireo, ary tena manala baraka ny asa fanaovan-gazety mihitsy. Isan’ny asa lehibe miandry ilay komity misahana ny famoahana ny karatry ny mpanao gazety matihanina izany. “ Laharam-pahamehana ho anay komitin’ny karatry ny mpanao gazety ny fanadiovana ity asa ity. Manala baraka ny asantsika ireny olona manatrika Conférence de Presse ireny, ary misandoka ho mpanao gazety kanefa tsy mamoaka article, na mandeha amin’ny télé, na radio akory ny reportage izay hataony. Ireny ilay antsointsika hoe Foza. Hesorintsika ireny foza ireny. Karatra matihanina tsy azo anaovana hosoka no hozaraina ho antsika , ka inoana marimarina fa tsy ho azon’ireny olona mpisoloky ireny hanaovana hosoka. Tao anatin’ity fivoriana voalohany ity dia efa nosoritana sahady ny fomba fiasan’ity komity ity, ka isan’izany ny ho fifidianana izay ho filohan’ny kaomisiona sy ny mpitondra teniny ”, araka ny fanazavan’i Nicolas Rabemananjara, mpikambana ao anatin’ny komity misahana ny famoahana ny Karatry ny Mpanao gazety.
Omaly no nivory voalohany ity komity ity. Tonga nanatrika izany Rocco Rasoanaivo, Nicolas Rabemananjara, izay samy mpikambana ao anatin’ity komity ity, ary solontenan’ny Tompona haino aman-jery. Ankoatra izay dia tonga nanatrika ity fotoana ity koa Mara Volamiranty Donna izay solontena avy amin’ny minisiteran’ny Serasera ary Rabenjamina Laza Marovola sy Hery Rakotomalala, izay samy mpikambana ao anatin’ity komity ity amin’ny maha solontenan’ny mpanao gazety azy ireo. “ Nisy tamin’ireo mpikambana tao anatin’ny komity no tsy tonga satria mbola namita iraka any ivelany. Ny iray kosa dia noho ny antony ara-pahasalamana. Izany hoe mazava avokoa ny antony tsy nahatongavan’izy ireo. Na izany aza dia niroso tamin’ny asa izahay komity izay tonga teto. Mbola hitohy amin’ny 30 novambra izao moa ny fivoriana manaraka”, araka ny fanazavana hatrany.
Mazava moa ny mason-tsivana ahazoana karatra matihanina, dia izay mpanao gazety nivoaka tamin’ny sekoly manofana ho mpanao gazety, ka am-perinasa izy ankehitriny. Takiana mihitsy ny diplaoma, ary hisy ny fanamarihana an’izany. Eo ihany koa ny mpanao gazety niasa telo taona tsy niato mihitsy, ary mbola miasa ao anatin’ity sehatra ity mandraka ankehitriny. “ Ho anay Tv Plus , dia hampiseho môdely mihitsy izahay satria dia izaho tompon’ny haino aman-jery mihitsy no hanome sy hisivana ilay mpanao gazety tokony homena an’izany, mba tsy ny mpamily na olon-kafa indray no sanatriavina ahazo karatra. Toy izany ilay fanadiovana hatao”, hoy hatrany ny fanazavan’ny filoha tale jeneralin’ny Tv Plus, Nicolas Rabemananjara, no sady komitin’ny karatra matihanina ho an’ny mpanao gazety.